Degaanka Saddex Higlo oo laga hirgeliyay isbitaal (Sawirro) - Ceelhuur Online
Home > Arimaha Bulshada > Degaanka Saddex Higlo oo laga hirgeliyay isbitaal (Sawirro)
August 4, 2018 admin636
Degaanka Saddex Higlo oo ka tirsan Gobolka Mudug ayaa shalay ayaa waxaa laga hirgeliyay isbitaal si uu u daboolo baahiyaha Caafimaad ee halkaasi ka taagnaa.
Munaasabaddii Xarigga lagaga jarayay isbitaal ayaa waxaa ka qayb galay Xildhibaano ka tirsan Labada Aqal ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ee laga soo doortay degaanada Galmudug, Wasiiro iyo Xildhibaano ka socda maamulka Galmudug, Maamulka Degmada Gaalkacyo ee Galmudug, maamulka Sadex Higlo iyo qeybaha Bulshada.
Wasiirka wasaaradda Caafimaadka Maamulka Galmudug, Marwo Naciimo Maxamed Maxamuud oo munaasabadda goobjoog ka ahayd ayaa sheegtay inay ku dayasho mudan yihiin Maamulka iyo Shacabka Sadex Higlo, Maaddaamada ay isku tashadeen.
Dhawaan ayay ahayd markii degaan Qaydaro ee Gobolka Galgaduud laga furay Cuspitaal bixin kara dhammaan adeegyada Caafimaad ee Dad weynaha, kaasoo ay iska kaashadeen maamulka Galmudug iyo masuuliyiinka Dowladda federaalka Soomaaliya oo ka soo jeeda Galmudug.
W/Arimaha gudaha Galmudug oo Caabudwaaq ku qabatay kulan looga tashanayay dhismaha golaha degaanka
Nabaddoon Saaka lagu dilay Magaalada Muqdisho
Magacyadda Mas’uuliyiinta loo magacaabay maamulka gobolka Hiiraan